Xiaomi Xiaomi Band7ဥရောပ ဗားရှင်း ဈေးနှုန်း ပေါက်ကြား - Pandaily
Xiaomi Xiaomi Band7ဥရောပ ဗားရှင်း ဈေးနှုန်း ပေါက်ကြား
Jun 14, 2022, 13:19ညနေ 2022/06/14 14:11:36 Pandaily
Xiaomi ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လက တရုတ် ဈေးကွက်မှာ Xiaomi Band7Series ကို မိတ်ဆက် ခဲ့ပြီး မကြာခင် ကမ္ဘာ မှာ စတင် ရောင်းချ ဖို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။ Snoopy Technologies လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ တရုတ် နည်းပညာ နယ်ပယ် က သတင်းရင်းမြစ် တစ်ခုက သည် သတင်းကို တနင်္လာနေ့က အတည်ပြု ခဲ့ပြီး ဥရောပ မှာ Xiaomi Band7ရဲ့ ဈေး နှုန်းကို ခန့်မှန်း ခဲ့ပါတယ်။
Mi Band7ဟာ ဥေရာပ မွာ ယူရို ၅၀ ကေန ၆၀ ၾကား ေစ်း ရွိၿပီး မႏွစ္က မိတ္ဆက္ ခဲ့တဲ့ Mi Band6ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္း ဟာ ၄၅. ၉၉ ယူ႐ို သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အကယ်၍ Xiaomi Band7သည် Huawei Band7ကဲ့သို့ ၅၉ ယူရို ဖြစ်ပါက သုံးစွဲ သူများသည် စျေးနှုန်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရန် ပိုမို ခက်ခဲ လိမ့်မည်။
တ႐ုတ္ မွာေတာ့ Xiaomi Xiaomi7ရဲ႕ Vanilla Edition ကို ၂ ၃၉ ယြမ္ (၃၅. ၅ ေဒၚလာ) နဲ႔ NFC Edition ကို ၂ ၇၉ ယြမ္ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ 1.62-inch AMOLED screen ကို တပ္ဆင္ ထား ျပီးေတာ့ Band ရဲ႕ ျမင္သာ တဲ့ ဧရိယာ ကို ၂၅
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Redmi က Note 11T Astro Boy Limited Edition ကို မိတ်ဆက်
အလေးချိန် 13.5g ရှိပြီး Xiaomi Xiaomi Band7မှာ dial theme ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ထည့်သွင်း ထားပြီး UI layout ကို လုံးဝ ပြောင်းလဲ ပြီး ၁၄ ရက်ကြာ ခံ နိုင်ပါတယ်။ အရောင် ခြောက် ရောင် TPU antibacterial wristband လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အနေဖြင့် ၎င်းသည် တစ်နေ့ လုံး သွေး အောက်စီဂျင် ပြည့်နှက် မှု ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံစံ ၁၂၀ ကို အဆင့်မြှင့် ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း အချက်အလက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။